Ny vato fotsy sy riandrano marobe dia mora aleha amin'ny lamasinina avy any Rome Termini mankany amin'ny tanànan'i Terni. Ny fiaran-dalamby mankany Terni dia matetika ary fiaran-dalamby mandeha isaky ny adiny. Rehefa tonga any amin'ny gara i Terni, misy fiara-mpitatitra afaka mitondra anao amin'ny riandrano. There is an entrance fee to the waterfalls.
Na izany aza, miaraka amin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby Trenitalia dia mahazo fihenam-bidy ianao ary tombony hafa iray hafa amin'ny fitsangatsanganana lamasinina mankany amin'ny riandrano Marmore:)
Ny riandrano lehibe indrindra sy sary nalaina tany Italia dia ny riandrano zothermal ao amin'ny tanànan'i Di Saturnia. Hita ao Tuscany, Ny loharano mafana amin'ny Saturnia dia iray mahafinaritra indrindra loharano mafana voajanahary any Eoropa. Io tanàna kely io dia fonenan'ny loharano mafana malaza hatramin'ny andron'ny Romanina. Ny fialan-tsasanao amin'ny Tuscany dia tsy ho vita raha tsy iray andro ao anaty tondra-drano mafana ao Saturnia. Ny loharano dia mahafinaritra ho an'ny fialana rehefa avy mitsidika ireo riandrano mahafinaritra hafa eo akaiky eo, bary, ary ny fianjeran'i Gorello.
Tsara kokoa ny mitsidika ny renirano Rhine amin'ny fahavaratra rehefa miempo ny ranomandry ary maintso ny zava-drehetra manodidina. Ny riandrano Rhine dia a 50 Fiaran-dalamby minitra miala an'i Zurich ary misy fiantsonan'ny fiaran-dalamby roa eo amin'ny lafiny roa amin'ireo riandrano. Ary noho izany, dia mora tokoa ny mitety rano amin'ny riandrano mahavariana ho an'ny fianakaviana sy Solo mpandeha.
Raha tia tafahoatra ianao ary mitady fomba mahafinaritra indrindra, tena ho hitanao ny rano mikoriana ao Stuibenfall any Tyrol. Mampitsangantsangana an'ity riandrano mampientam-po sy mampientam-po ity ny tetezana fampiatoana sy ny tilikambo fampiatoana. Ny halaviran'ny riandranon'i Tyrol avo indrindra dia 2.4km, mba hahafahanao mikaroka azy amin'ny dia an-tongotra mitsangatsangana. The tongotra lavitra lalana manomboka ary vita eo amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara ao an-tanànan'i Umhausen.
Ao amin'ny tanin'i Aotrisy no misy azy zaridainam-pirenena lehibe indrindra, Valan-javaboarin'i Tauern avo, Ny riandrano Krimml dia riandrano telo karazana, mahatratra 1490 m amin'ny avo sy 380 m avo. Ala fahiny, biby, serfa mena, ary ny voromahery volamena dia vitsivitsy monja amin'ireo mponina ao amin'ny valan-javaboary izay mety hiampita aminao miaraka amin'ny lalana mankany amin'ny riandrano mahavariana iray hafa any Eropa. Raha toa ianao ka mpankafy lasy ary mpandeha an-tongotra za-draharaha, ity zaridainam-panjakana ity sy ny riandrano Krimml dia mety ho fanentanana tsy hay hadinoina any amin'ny lemaka any Aotrisy.
Mipetraka eny amin'ny lohasaha maitso manitra, ireo riandrano avo Gavarnie any Frantsa dia 422 metatra ny haavony ary be mpitia eo amin'ny mpizahatany. Miaraka amin'ny fahitana ny Hautes Pyrenees, ny riandranon'i Gavarnie dia tantaram-pitiavana ary tonga lafatra amin'ny mpitsangantsangana matanjaka izay maniry ny hitrandraka sy handresy ilay Pyrenees frantsay. Gavarnie riandrano irery ihany 40 Fiaramanidina minitra miala ny tanàna Gavarnie.
Toerana nofinofy i Eropa ho an'ny mpandeha irery sy fianakaviana. Tena mora mamakivaky eropeanina ary ny riandrano mahafinaritra rehetra ao anaty lisitra misy anay dia azo alaina amin'ny alàlan'ny lamasinina na fiara fitateram-bahoaka, for andro-nivezivezy na toby, ho an'ny mpitsangatsangana na mpandeha za-draharaha izay mahatsiaro ho sahirana ary manonofy hikaroka ny tsara indrindra amin'ny toetran'i Eoropa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Ny kamory be indrindra any Eropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-waterfalls-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)